မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး...! - Thadin
HomeNEWSမထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး…!
May 16, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး…!
ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေကြား ရေပန်းအစားဆုံး Game ဆိုရင် Mobile Legends ပဲဖြစ်ပြီး လူတော်တော်များများ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုပြောပြမဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးဟာ Gamer တစ်ယောက်အတွက်တော့ဝမ်းနည်းရဆုံး အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂိမ်းကို စိတ်မဝင်စားသူအတွက်တော့ ရယ်ရွှင်စရာလို ဖြစ်ချင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
အဖြစ်အပျက်လေးကတော့ Mobile Legends ကို ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆော့နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်းနိုင်ငံက ကောင်းလေးတစ်ယောက်ငိုယိုနေရတဲ့ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆိုပါဂိမ်းဆော့နေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ Mobile Legends အကောင့်ကို ရက်ပေါင်း ၁၀၄၉၄ ရက်၊ ၁နာရီနဲ့ ၂၃မိနှစ်/ နှစ်ပေါင်းအားဖြင့် ၃၀နီးပါးလောက် အပိတ်ခံခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းကစားသူဘက်က ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ အမှားမျိုးတွေ ကျူးလွန်မိတဲ့အခါဂိမ်းကစားခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခြင်းခံရတတ်ပြီး အချို့ဆို ရာသက်ပန်နီးပါ အပိတ်ခံရတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
အခု ဖိလစ်ပိုင်ကောင်လေးကတော့ သူ့ရဲ့အကောင့်ကို နှစ်ပေါင်း အတော်ကြာကြာ အပိတ် ခံရပြီး ပြန်ဆော့လို့ရခဲ့ရင်တောင် သူ့ရဲ့ အသက်လည်း တော်တော်လေး ကြီးနေလောက်ပါပြီ။ ဒီကောင်လေးရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဗီဒီယိုရိုက်ယူပြီး အခုလို အွန်လိုင်းမှာ မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို နှစ်ရှည် လများ အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာ အတည်တကျမသိရပေမဲ့ Mobile Legends ဆော့တဲ့ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူအချို့ကတော့ အကြံအဖန်လုပ်ထားတဲ့ code တွေကို အသုံးပြုလို့ အban ခံရတာလို့ မှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။
အချို့ အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတွေကလည်း ကျောင်းတက်နေတဲ့ အရွယ်ဖြစ်တာကြောင့် ဖုန်းဂိမ်းကို ရပ်တန့်ပြီး ကျောင်းစာကို အာရုံပြန်စိုက်လို့ရတာပေါ့ ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း ပေးတာတွေ့ရပါတယ်။
ယနခေ့တျေ လူငယျတှကွေား ရပေနျးအစားဆုံး Game ဆိုရငျ Mobile Legends ပဲဖွဈပွီး လူတျောတျောမြားမြား ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ မိုဘိုငျးဂိမျးတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ယခုပွောပွမဲ့ အဖွဈအပကျြလေးဟာ Gamer တဈယောကျအတှကျတော့ဝမျးနညျးရဆုံး အဖွဈအပကျြတဈခုဖွဈပွီး ဂိမျးကို စိတျမဝငျစားသူအတှကျတော့ ရယျရှငျစရာလို ဖွဈခငျြ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
အဖွဈအပကျြလေးကတော့ Mobile Legends ကို ဆှဲဆှဲမွဲမွဲဆော့နတေဲ့ ဖိလဈပိုငျးနိုငျငံက ကောငျးလေးတဈယောကျငိုယိုနရေတဲ့ အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အဆိုပါဂိမျးဆော့နတေဲ့ ကောငျလေးရဲ့ Mobile Legends အကောငျ့ကို ရကျပေါငျး ၁၀၄၉၄ ရကျ၊ ၁နာရီနဲ့ ၂၃မိနှဈ/ နှဈပေါငျးအားဖွငျ့ ၃၀နီးပါးလောကျ အပိတျခံခဲ့ရလို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဂိမျးကစားသူဘကျက ခှငျ့မလှတျနိုငျတဲ့ အမှားမြိုးတှေ ကြူးလှနျမိတဲ့အခါဂိမျးကစားခှငျ့ကို ပိတျပငျခွငျးခံရတတျပွီး အခြို့ဆို ရာသကျပနျနီးပါ အပိတျခံရတာမြိုးတှလေညျး ရှိတတျပါတယျ။
အခု ဖိလဈပိုငျကောငျလေးကတော့ သူ့ရဲ့အကောငျ့ကို နှဈပေါငျး အတျောကွာကွာ အပိတျ ခံရပွီး ပွနျဆော့လို့ရခဲ့ရငျတောငျ သူ့ရဲ့ အသကျလညျး တျောတျောလေး ကွီးနလေောကျပါပွီ။ ဒီကောငျလေးရဲ့ အဖွဈအပကျြကိုတော့ ဖခငျဖွဈသူက ဗီဒီယိုရိုကျယူပွီး အခုလို အှနျလိုငျးမှာ မြှဝပေေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ အခုလို နှဈရှညျ လမြား အပိတျခံရတယျဆိုတာ အတညျတကမြသိရပမေဲ့ Mobile Legends ဆော့တဲ့ အှနျလိုငျးသုံးစှဲသူအခြို့ကတော့ အကွံအဖနျလုပျထားတဲ့ code တှကေို အသုံးပွုလို့ အban ခံရတာလို့ မှတျခကျြပေးကွပါတယျ။
အခြို့ အှနျလိုငျးသုံးစှဲသူတှကေလညျး ကြောငျးတကျနတေဲ့ အရှယျဖွဈတာကွောငျ့ ဖုနျးဂိမျးကို ရပျတနျ့ပွီး ကြောငျးစာကို အာရုံပွနျစိုကျလို့ရတာပေါ့ ဆိုတဲ့ မှတျခကျြတှလေညျး ပေးတာတှရေ့ပါတယျ။
This Year : 232465
Total Users : 591489
Total views : 2713223